Ammaanka Xadka Soomaaliya iyo Kenya oo la adkeeyay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ammaanka Xadka Soomaaliya iyo Kenya oo la adkeeyay
Iyadoo Saraakiisha ammaanka dowladda Kenya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaalyahanada Al-Shabaab ay weerar ka geystaan dalka Kenya, ayaa dowlada Kenya waxa ay ciidamo dheeraad ah ay geystay xadka ay la wadaagto dalka Soomaaliya.
Warbixin hoose oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ilaha sirdoonka ee dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ciidamo dheeraad ah ay geysay xadka ay la wadaagto dalka Soomaaliya , si looga baaqsado in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay ka gudbaan xadka Soomaaliya , islamarkaana ay gudaha u galaan dalka Kenya.
Ammaanka Magaalooyinka Waa weyn ee dalka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay , waxaana ilaha sirdoonka ay ka digayaan weeraro ay geystaan Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay laba jibaareen weerarada ay ku qaadayaan ciidanka dowladda Kenya ee ku safraaya xadka labada dal , waxaana weeraro ka dhacay xadka lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Kenya.
Xarakada Al-Shabaab ayaa Kenya kusoo qaadeysay weeraro laga soo bilaabo sanadkii 2011 markaasi oo ciidanka dowladda kenya ay gudaha usoo galeen Soomaaliya.